Baolina kitra - "CAN 2019" :: Mbola tazonin’i Nicolas Dupuis ho ekipa goavana i Tonizia • AoRaha
Baolina kitra – « CAN 2019 » Mbola tazonin’i Nicolas Dupuis ho ekipa goavana i Tonizia
Hipetraka ho andro manan-tantara ho an’ny baolina kitra malagasy, anio alina. Hia­trika ny “Aigles de Carthage” avy any Tonizia amin’ny 10 ora alina (ora eto Madagasikara) ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea ao anatin’ ny dingan’ny ampahefa-dalan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019. Mbola mitana ny maha ekipa goavana an’ity ekipan’i Alain Giresse, mpilalao iraisam-pirenena frantsay, ity i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly malagasy. “Eto amin’ity kianja ity (Stade Al Salam) no hanoratan’ny Barea ny tantaran’ny baolina kitra malagasy. Tsara ilay bozaka voajanahary ary hilalao tsara ny mpilalaon­tsika. Ny an’i Tonizia koa anefa, etsy andaniny, naha­vita dingana tsara nandritra ireny lalao rehetra ireny”, araka ny voalazany. Manamafy ny hevitry ny mpanazatra nasionaly ihany koa ny mpilalao malagasy. “ Tsy ho mora ny hifandona amin’i Tonizia. Tsy hiala hatramin’ ny farany anefa izahay fa hanao izay vita hatrany”, araka ny nambaran’i Pascal Razaka­nantenaina na i Bapasy, vodilaharana afovoan’ny Barea.
Manana tombony maro ny mpilalao malagasy mano­loana an’i Tonizia. Efa nahazo andro iray hakana aina izy ireo taorian’ny niatrehany ny ampahavalon-dalana. Ny alatsinainy alina lasa teo kosa ny Tonizianina vao niatrika izany nanoloana an’i Ghana. Samy nisaraka tamin’ny tsotso­rimamba nisarahana, “tirs au but”, ireo ekipa roa hifanan­drina amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ireo. Efa nahatafiditra baolina fito ihany koa ny Barea raha telo ny azy. Nahatafiditra baolina telo tao amin’ny haraton’ny “Aigles de Carthage” kosa ireo mpifanandrina taminy, raha efatra no matin’ireo ekipa nihaona tamintsika tao amin’ ny harato nandrasan’i Melvin Adrien. Manana tombony eo amin’ny fanafihana, araka izany, ny ekipam-pirenena malagasy manoloana ity ekipa hifanandrina aminy ity. Azo heverina ho misy lesoka kosa ny fiarovan-tena ho antsika, raha ireo baolina maty tao amintsika ireo no jerena.
Salama tsara ireo mpilalao rehetra hiatrika an’ity andro iray ho an’ny Malagasy ity ary tsy hisy ireo mpilalao mijanona noho ny karatra mavo indroa. Vonona ny hihaona amin’ny Barea ihany koa ny mpilalaon’ i Tonizia rehetra. Marihina fa manana mpila ravinahitra avy ao amin’ny fifaninanam-pirenena frantsay na ny “Ligue1” dimy (Mouez Hassen, Ellyes Skhiri, Naïm Sliti, Bassem Srarfi ary Wahbi Khazri) ity hifanan­drina amintsika. Mampandry saina ny Malagasy anefa i Abel Anicet Andrianantenaina ary nilaza fa “isika tsy matahotra na iza na iza tonga eo. Handeha hatramin’ny farany isika sy matoky ny fahaizan’ny mpilalao tsirairay”.
Fiainan’antoko :: Hanova rafi-pitantanana sy fitsipika anatiny ny TIM